शब्दकोश: सुर न ताल, मदन गोपाल !
Posted by Jotare Dhaiba at Saturday, June 27, 2009
लेख्दा बढी लेखिएला भन्ने डर .. नलेख्दा छुटिएला भन्ने डर ...!
यो पोष्ट पढ्दा मलाई तीनवटा कुरा भन्न मन लाग्यो...
पहिलो प्राय हरेक प्राणीलाई आफ्नो बारे नराम्रो लेखेको देखे झनक्क रिस उठेर आउँछ ....
दोश्रो तर हरेक ब्लगरले आफ्नो मनको कुरा लेख्न पाउनु पर्छ ...आफुलाई नराम्रो लागेको कुराको पनि राम्रो मात्र बर्णन गर्ने भने त पोष्टको औचित्य नै सकिई हाल्छ नि | त्यसैले धाईबाजीले मन नपरेको कुरा मन परेन भन्दा आफ्नै राम्रोको लागि भनेको हो भन्ने बुझेर ती गजल गायकहरु पक्का रिसाउनु हुन्न होला ..
अनि तेश्रो धाईबाजीले दोश्रो अन्तिम प्यारामा भन्नु भए झैं कलामा साधना र संघर्षको ठुलो हात हुन्छ | यसलाई उहाँहरुले बुझ्नु भए देखि केहि समय पछी यो ब्लगमा अर्को पोष्ट पक्का पढ्न पाइन्छ "सुर र ताल ..मदन गोपाल"
आफ्नो कुरा गर्दा म कार्यक्रममा थिईन त्यसैले सो कार्यक्रम बारे मेरो मनको कुरा भन्न सक्दिन ... पोष्ट बारे यति चाहिँ पक्का भन्न सक्छु ...
पर्‍यो जब रात कोही याद आयो
भन्ने गजलले मलाई पुरा फ्रेश बनायो ...
दीपक जडित June 27, 2009
शुरुको हरफ देख्दै अचम्म लाग्यो - गुरुकुलमा हुने कार्यक्रमहरु पनि यस्तो हुने रहेछ हगि ? आफैंलाई यत्ति प्रश्न गरें ।
Jotare Dhaiba June 27, 2009
धेरै धन्यवाद मिलनजी, मनको कुरा खुलेर राखिदिनुभयो ।
तपाईँका तीन कुरामा म क्रमश: दुई कुरा भन्छु:
# हो, मानिस स्वभावैले प्रशंसाको भोको हुन्छ र हरेक व्यक्तिलाई आफूविरुद्धको घोचपेच र आलोचना बिझाउँछ । र क्षमता र हुती नभएको व्यक्तिले आफूमा त्यो नभएको विचार्दैन र स्विकार्दैन । यस्तोमा कसैगरी त्यस्तो अनुभूति दिलाउन झनक्क रिस उठाएर भए पनि यस्तै हामी साथीभाइ र शुभेच्छुकबाट नै हो । मदन गोपाल मेरा चिनाजान थिए र नै मलाई सरोकार भयो र यति खुलेर लेख्‍न अघि सरेँ । अनि यो फेरि कुनै व्यक्तिविशेको खेदो गरेर लेखिएको पनि होइन (मैले लेखमै पनि भनेको छु), बरू नेपाली सङ्गीतको विसङ्गतिलाई उधिन्ने प्रयास हो । केही राम्रो हुन्छ कि भन्ने आशा अनुरूप ।
# हामी ब्लगरले मनमा लागेको कुरा त लेख्‍ने हो । तर क्षतविक्षत तरिकाले जे पायो त्यही लेख्‍ने पनि होइन । यही स्वतन्त्रताको बीचमा मनको भावलाई खुलेर बिसाउँदा सन्तुलन, जिम्मेवारी र सामाजिक सरोकारका कुराले पनि उत्तिकै बाँधेको हुन्छ हामीलाई । यो त हामीले महसुस गरेकै कुरा हो ।
यो गुरुकुलमा भएको गजल कार्यक्रमविशेषमा लेखिएको टटाँसो नभई त्यसमा आधारित भई नेपाली सङ्गीतको 'हावा गायन'बारे चर्चा गरिएको लेख हो । अनि गुरुकुलमा हुने सबै कार्यक्रम गुरुकुल आफैँले पनि गर्दैन । कार्यक्रमका लागि भाडामा हल उपलब्ध पनि गराउँछ यसले । तब त स्वाभाविकै हो, कार्यक्रम आयोजकपिच्छे स्तर तल-माथि हुने गर्छ । अनि गजलको त्यो कार्यक्रम 'झुर' भन्ने पनि थिएन, केवल एकाध गायकले त्यहाँ दम तोडिदिएका हुन्, त्यत्ति हो ।
तपाईँलाई पनि धेरै आभार !
wordflows June 27, 2009
मलाइ पनि आचम्म लागिरहेछ गुरुकुल उत्कृस्त कला सधन प्रस्तुत् गर्ने ठाउजस्तो लग्थ्यो।
कृष्णपक्ष उज्यालोको खोजिमा June 28, 2009
सुर ताल आ आफ्नै ठाउमा छन, तर गज़ल खरर....वाचन नगरी यसरी गाएर प्रस्तुत गर्ने चलन बढ्दै गएकोमामा धेरै खुसि लाग्यो।
टासोले त्यस्तो साह्रै घोचपेच गरेको चाहि छैन है यस्तो त साथिभाइमा चलि हाल्छ नि हैन र? अनि कमि कमजोरी र गल्ति औल्याइदिनु एउटा असल मित्रको कर्तव्य पनि त हो ।
भित्र भित्र झनक्क रिसाउनु भयो कि गोपाल जी ? यसरी भावनामा डुबेर शव्दहरु खिप्ने लेखकको ब्लगमा गरिएको यो चर्चा परिचर्चाले त एक हिसाबले तपाइको उचाई झन बढाएको नै ठान्छु म त, अब रियाज र तयारीमा आफ्नो कमि कमजोरी रहेको कुरा त मनन गर्नु भएकै रहेछ त्यहि बेला, अब चाहि धाइबाजीलाइ "ताल जमाए गोपालले" भन्न बाध्य पार्ने गरि पूर्ण तयारीका साथ प्रस्तुत हुनु होला - कुनै दिन ।
सिकारु June 28, 2009
मलाई पनि निरासित जस्तै बनायो गुरुकुल जस्तो स्वच्छ प्रतिभाको बिसौनी मानिएको ठाउँमा सुर न तालका मदन गोपालहरुको रजाई देख्दा(पढेको भरमा) । गुणस्तरिय गायकी को भन्दा संख्यात्मक गायकीले जरा फैलाईरहेको सन्दर्भमा धाइवा जी को यो झोकिलो आवाज ले "सुर न तालका मदन गोपाल" हरुलाई केहि राहत अवस्य मिल्नेछ ।
तर निश्चय पनि गायकीमा भएको रमाइलो कुरालाई ब्लगमा मार्फत पस्कनुलाई अन्यथा ठान्नू हुने छैन गायकी मण्डलले किनकी धाइबा जी को मुखले माथि नै बोलिसकेको छ अन्तरंग सहयात्रीको बारेमा । धाइबा जी ले एउटा सकारात्मक कुराको प्रसंगमा बोल्नु भएको मात्र जस्तो लाग्छ मलाई
Dilip Acharya June 28, 2009
तपाईको टाँसो र टिप्पणीमा पनि जो बाँकी यथोचित पढेपछि यो बिषय भने छर्लंङगै भयो ।
म आफू पनि १-२ पटक मजबूरीमा यस्तो बेसुरा-रागको श्रोता बन्नु परेकोले तपाईको पीडा राम्ररी बुझें ।
जे होस आफूले 'कान-फट'सङ्गीत सुनेर पनि हामीलाई भने गज्जब मनोरञ्जन दिनु भयो । एकदमै स्वाद लागयो यो पोष्ट ।
गाएक मञ्चबाट ओझेल भएपछि, स्रोतामण्डलीले तृप्‍ति र चैनको श्‍वास फेरेको
"गाउने कलाकार गला बिसाएर छेउ लागेपछि स्रोता मन्त्रमुग्ध भएर रमाए"
भन्ने हरफहरु पढेपछि धेरै बेर एक्लै पनि हाँसें म त ।
Basanta June 28, 2009
यस्तो 'पिडा' भोग्ने 'सौभाग्य' मिलिरहन्छ हामीलाई। आफ्नो क्षमतालाई नतौलीकनै लहडको भरमा लेखक-कवि, संगीतकार र गायक हुने फेशन छ हामीमा। अभ्यास र साधना कुन चराको नाम हो पनि धेरै लाई थाहा हुँदैन। समाजको औसत बुद्धि र सौन्दर्य-चेत त्यति माथिको नभैसकेकोले त्यस्ता ब्यक्तिलाई वाह! वाह!! गर्दिने केहि हुन्छन् पनि। कतिपय अवश्थामा त्यो वाह! वाह!! प्रायोजित वा किनिएको पनि हुनसक्छ।
हामीलाई धाइबाजीले गरेको यो शल्यकृया जस्तै धेरै शल्यकृयाहरुको आवश्यकता छ। आफ्नै निकट मित्रको कमजोरीमाथि यति सटिक र खुलस्त आलोचना गर्न डराऊँछन् धेरै मान्छे तर गर्नैपर्ने कुरो हो यो।
दिनेश राज July 02, 2009
नेपाली साहित्यमा गजलले वाचन बाट गायनमा फड्को मार्न नसक्नु को एउटा कारण यो पनि हो जस्तो लाग्छ । गजल भन्ने बितिक्कै राग र शास्त्रीय संगित नभै नहुने भन्ने सोचाइ हाबिनै छ । अनि गायकहरु पनि कनिकनि गजल लाई शास्त्रीय संगित नै बनाउन खोज्छन् ।धाइबा जी को आशयलाई बुझ्नेहरुले सहि रुपमा बुझिदिए धेरै राम्रो हु्न्थ्यो ।